WARKII HORE WAR SOO DHAAF: Sarri oo qaab ciyaareedka Liita ee Jorginho ku eedeeyay xiddigaha kale ee kooxda…(Muxuu yiri??!!) – Gool FM
WARKII HORE WAR SOO DHAAF: Sarri oo qaab ciyaareedka Liita ee Jorginho ku eedeeyay xiddigaha kale ee kooxda…(Muxuu yiri??!!)
(London) 04 Feb 2019. Falanqeeyayaasha ciyaaraha ayaa marar badan dhaleeceeyay qaab ciyaareedka Jorginho iyadoo uu Ferdinand mar sheegay in xiddiga qadka dhexe ee reer Talyaani uusan waxba ku soo kordhin Kooxda dhan Daafac iyo dhan weerarba isagoo xitaa ku sheegay inuusanba ordi karin.
Yeelkeede, Tababare Sarri ayaa difaacay xiddiga ay iskala yimaadeen Napoli isagoona qaab ciyaareedkiisa liita ku eedeeyay xiddiga kale ee kooxda oo uu ku sheegay inaysan dhaq-dhaqaaq sameynayn marka uu Jorginho kubbada lugta ku hayo.
“Jorginho si aad u fiican ayuu u ciyaaray,” Sarri ayaa sidaa yiri.
“Jorginho wuxuu u baahan yahay dhaq-dhaqaaq ciyaartoyda kale ah marka aysan kubbada heysan, waayo wuxuu u bartay inuu ciyaaro kubbad hal taabasho ah, way adag tahay inaad ciyaarto kubbad hal taabasho ah haddii aadan dha-dhaqaaq ka helin ciyaartoyda kale.
“Sidaa darteed si fiican ayay kooxda u ciyaartay 25 ilaa 30-kii daqiiqo ee ugu horreeyay ciyaarta, waxaan sameynaynay dha-dhaqaaq marka aan kubbada heysan, Jorginho way u sahlaneyd markaa sida aan aaminsanahay.
“Kubbadeena ayaan ciyaarnay maxaa yeelay si dhaqsi leh ayaan u dhaqaajineynay kubbada, si aad u fiican.”.
Messi, Ronaldo iyo Mbappe oo iskula dhagan abaal marinta Kobta Dahabka